Fankiishiniin kun aduu waggaadhaan,ji'aan,guyyaadhaan ibsame dhangiiwwaan man'ee keessati shallaguun deebisee mul'isa. Dhangii durtii man'eewwaan DATE fankiishinii of keessa qaban dhangii aduu ta'u,garu man'eewwaan dhangi lakkoofsa biraan dhangeessuu dandessa.
Waggaan intiijera 1583 hanga 9957 ykn 0 hanga 99 gidduutti argamudha.
Ji'a intiijeera ji'a agarsiisudha.
Guyyaa intiijeera guyyaa ji'a agarsiisudha.
Yoo gatiin ji'aaf gatiin guyyaa dangaa kennameen oli ta'e,gara dijiiti itti aanutti darba.Yoo=DATE(00;12;31) galchitee bu'aan 12/31/00 ta'a.Karaa biraan, yoo=DATE(00;13;31) galchite, bu'aan 1/31/01 ta'a.
=DATE(00;1;31) Yoo qindaa'inni dhangii man'ee MM/DD/YY ta'e 1/31/00 kenna'